Unyulo eSpain aluchaphazeli imarike yemasheya | Ezezimali
Isibhengezo sokubanjwa konyulo jikelele Ngomhla we-28 ku-Epreli ayichaphazeli ukulingana. Le yinto eyothuse inxenye entle yabatyali mali abancinci nabaphakathi kuba ngokubanzi ivelisa uzinzo kwiimarike zezemali. Kodwa ngeli xesha ayivelisi nakuphi na ukubakho kokhuseleko oludweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35. Kwintshukumo enokuthi ithathelwe ingqalelo njenge-atypical ngenxa yokungaqhelekanga kolu hlobo lwesimo.
Okwangoku, imarike yestokhwe ixhalabile ngakumbi ngolunye uthotho lwezinto ezigqiba ukumiliselwa kwe-Ibex 35. Umzekelo, ubudlelwane kwezorhwebo phakathi kweMelika ne China, iindaba zamva nje malunga nokunyuka kwenqanaba lenzala okanye iziphumo zeshishini ezibonelelweyo ziinkampani. Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba iimarike zezemali zihamba kwisitishi esisecaleni apho kuthatha iinzame ezininzi ukuphuma.
Kule meko ngokubanzi, ifuthe lonyulo oluzayo alunto. Ubuncinci okwangoku kunye neendleko zento enokwenzeka kwiiveki ezikhokelela kumbhiyozo wayo. Kodwa ngakumbi xa iziphumo zisaziwa kwaye uhlobo oluthile lukarhulumente lunokucingelwa kule minyaka imbalwa izayo. Nangona oku sele kungomnye umba esiza kujongana nawo xa kumiselwa urhulumente omtsha kwilizwe lethu. Apho imarike yestokhwe saseSpain kuya kufuneka isabele, ngandlela thile.
1 Unyulo aludweliswanga okwangoku
2 Babheja ngurhulumente wekhulu
3 Ukhuseleko oluthe kratya
Unyulo aludweliswanga okwangoku
Okwangoku, kuphela ngamaxabiso kwicandelo lombane laseSpain elinamandla kuphela kwabo banobuthathaka kwisibhengezo sonyulo. Kuba licandelo elilawulwayo kwaye lixhomekeke kwizigqibo zikarhulumente osemandleni. Ngale ndlela, babonakalise ukusabela okuncinci kancinci ngenxa yokungaqiniseki kokuza kwenziwa ngurhulumente omtsha. Ngale ndlela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ubudlelwane besigqeba sikaPedro Sánchez kunye iinkampani zombane zilinganiswe njengabahlobo kakhulu. Apho babenenkwenkwezi kwi-rally enkulu ye-bullish kwiinyanga nje ezidlulileyo, ngokuhlaziywa kufutshane ne-30%.
Ngokuchasene noko, amacandelo aseleyo ezabelo zeSpanish okomzuzwana akanalusini kule nkqubo yonyulo. Kuba ngokwenyani, abayibonisi le nto xabiso lwamaxabiso yezenzo zabo. Kwelinye icala, kuyabetha ukuba icandelo leebhanki alithathelwa ngumphumo wonyulo. Apho ibhaptizwa kwinkqubo ye-bearish kodwa ngenxa yezinye iimeko, ezinje ngeengxaki ezingapheliyo ngokwazo. Njengamanye amacandelo esitokhwe enza i-index ye-equity index, Ibex 35.
Babheja ngurhulumente wekhulu
Umnqweno wokukhuseleka okumelwe kwimarike yaseSpain kukuba ekugqibeleni kukho urhulumente wobumbano phakathi kwe I-PSOE kunye nabemi. Into eqinisekisiweyo luvavanyo lwamva nje olwenziwe kwiinyanga ezidlulileyo. Iya kuba sisiphumo ekufuneka sichazwe njengolwanelisayo kwimidla yeenkampani ezidwelisiweyo. Ngokukodwa, ngokubhekisele kwicandelo leebhanki lesizwe, elingakhange liwathande amanye amanyathelo athathwe ngurhulumente wangoku.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ngeli xesha ukuba ii-equities zaseSpain zikwimeko entle kakhulu. Kungenxa yokuba kuhlangana iindlela zokuthatha enye okanye enye imeko kwaye okwangoku ayichaphazeki yinto yokuba kwiinyanga ezimbini kuzakubakho unyulo kwilizwe lethu. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, Iziphumo azisebenzi kwaye iye ihanjiswe zezinye iinkalo ezithile ngakumbi ezinento yokwenza noqoqosho ngokwalo. Ngoku umbuzo obuzwe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi kukuba ingaba ii-equity zaseSpain ziya kuhlala ixesha elide ezi ndlela zokwenza amaxabiso kwixabiso lemarike yemasheya.
Esinye seziganeko ekufuneka sivavanywe ngeli xesha kungenxa yemeko yokuba amanye amaxabiso afanelekileyo kwisalathiso esikhethiweyo sentengiso yemasheya yaseSpain ahamba kuyo. Ngokunyuka kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo ezibangele ukuba amaxabiso abo anyuke nge-15%. Yimeko ethile yenkampani yokwakha Ukutya eqokelele ukwanda kwe-15% ukusukela ekuqaleni konyaka. Ukuba nokuchasana okubonakalayo kumanqanaba ee-20,58 ze-euro ngesabelo ngasinye, esisiseko sejelo lokuqhubela phambili eliye laphuhlisa.
Kule meko kukho iqela lamaxabiso esitokhwe aya kuthi ayazi kakuhle into enokwenzeka ukusukela ngoku ngokunxulumene nenkqubo yonyulo. Kwaye nangayiphi na indlela, inokuba ifaneleke kakhulu ukuze imeko yayo ikwazi ukuya kwelinye okanye kwelinye icala lesikali. Okanye kweyona meko imbi, wakube unedatha yokwazi ukuba yintoni umbala karhulumente omtsha ukuqeqeshwa eSpain. Ukusuka kolu luvo, unyulo lowiso-mthetho kwilizwe lethu lunokubaluleka.
Kule meko, ubulumko kufuneka buphawule isenzo sabatyalomali abancinci nabaphakathi ukusukela ngoku. Ngaphandle kwabanye Ukuqwalaselwa kobugcisa kwaye mhlawumbi nakwimbono yeziseko zokhuselo ezidweliswe kwiimarike zezabelo. Elinye iqhinga elinokusetyenziswa kukuhlala kude kwiimarike zezemali kude kube kungathandabuzeki ngento eza kwenzeka eSpain.
Sele unedatha yokuba ingaba yeyiphi na imigaqo-nkqubo yezoqoqosho yolawulo olutsha. Ukuze ngale ndlela, ikwimeko yokuseka ngokusesikweni ukuthengwa okukhethiweyo kwintengiso yesitokhwe sikazwelonke. Ngokuncitshiswa komngcipheko kwimisebenzi eyenziwa ngabatyali mali. Ukuze imali ekhoyo yokutyala imali kwezi asethi zemali ikhuselwe. Njengenye indlela yokwandisa umvuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Unyulo eSpain aluchaphazeli imarike yemasheya